RASMI: Maamulka Premier League Oo Hal Arin Ka Dalbaday Dawalada Ingiriiska Iyo Sababta Dalabkan Keentay. - Gool24.Net
RASMI: Maamulka Premier League Oo Hal Arin Ka Dalbaday Dawalada Ingiriiska Iyo Sababta Dalabkan Keentay.
May 11, 2020 Mahamoud Batalaale
Shaqo badan ayaa ka socota kubbada cagta UK waxaana jira dhinacyo badan oo ku hawlan sidii xili ciyaareedkan loo dhamaystiri lahaa laakiin waxa jira dhibaatooyin maalmihii ugu danbeeyay soo jiitamayay oo hadda ay xal u raadinayaan maamulka Premier leauge iyo FA-gu.
Waxaanu dhawaan idiin soo gudbinay in FA-gu soo faro galiyay is mari waagii maamulka Premier league iyo 20 ka kooxood ee horyaalka Ingiriiska laakiin hadda maamula premier league ayaa markiisa hal arin ka dalbaday dawlada UK.
Madaxa maamulka Premier leauge ee Richard Masters ayaa shaaciyay in ay dawlada UK kala xidhiidheen haddii koox kastaba loo ogolaan karo in ay garoonkeeda ku ciyaari karto kulamada baaqiga uga ahaa minankeeda inkasta oo ay markii hore jirtay cabsi taageerayaasha laga qabay.
Halka dhibaato ee laga socon kari waayay waxa uu ahaa in kooxaha heerka hoose kaga jira miiska kala saraynta Premier League ay min caarad ku noqdeen qorshihii maamulka Premier league ee ahaa in garoomo dhex dhexaad ah xili ciyaareedka lagu dhamaystiro wuxuuna ahaa qorshe markii hore dawladu keentay.
Laakiin war rasmi ah oo uu hadda soo saaray maamulka premier league ayuu ku shaaciyay in ay hadda ka jawaabayaan cabashadii kooxaha yar yar ee Premier league ku diideen in ay ku ciyaaraan garoomo dhex dhexaad ah.
Maamulka Premier league oo tixgalinaya cabshada kooxaha yar yar ee doonayay in ay garoomadooda ku ciyaaraan kulamada u baaqiga ah ayaa keentay in maamulka Premier league uu dawlada UK ka codsaday in loo ogolaan karo in kooxuhu ay garoomadooda ku ciyaari karaan kulamada hadhsan.
Maamulka Premier league ayaa dawlada waydiistay in koox kastaaba garoonkeeda oo madhan ay ku ciyaari karto kuklamada Premier league baaqiga uga ahaa waana arin ay qasbeen kooxihii lafta dhuunta gashay ku noqday in xili ciyaareedka dib loo bilaabo.
Madaxa fulinta maamulka Premeir League ee Richard Masters oo ka hadlaya rabitaanka kooxaha horyaalka ee garoomadooda ayaa yidhi: “Qof kastaaba waxa uu door bidayaa in ku ciyaaro mimankiisa iyo marti haddii ay dhamaan suurtogal yihiin, waxaana cadaan ah in qaar ka mid ah kooxuhu in ka badan oo ka xoogan kuwa kale dareemayaan”.
Intaas kadib Richard Masters ayaa ka hadalay in ay dawlada UK kala tashanayaan in kooxaha loo ogolaan karo in ay garoomadooda ku ciyaari karaan wuxuuna yidhi: “Waxaanu xidhiidh kala samaynay xukuumada waxaananu dhegaysanay talada anaga oo ixtiraamayna aragtida kooxaha ee wada hadalka ku jiray”.
Madaaxa fulinta Maamulka Premeir league ee Richard Masters ayaa tilmaamay in isku duubnida rabitaanka kooxaha oo dhan xili ciyaareedka ku dhamaystiri doonaan wuxuuna yidhi:”Xaqiiqdii isku duubnaan xoogan oo ah rabitaanka ayaa lagu dhamaystiri karaa inta hadhsan xili ciyaareedka”.
Dawlada UK ayaa markii hore amartay in sida kaliya ee xili ciyaareedka lagu dhamaystiri karaa tahay in garoomo dhex dhexaad ah lagu ciyaaro laakiin kooxo heerka labaad ka baxsanaya ayaa u arkay in la ‘aanta garoomadoodu ay xaalada ku sii xumaynayso.
Sababta markii hore ay dawladu u amartay in garoomo dhex dhexaad ah lagu ciyaaro ayaa ahayd cabsi laga qabay in taageerayaasha kooxuhu ay iska soo hor buuxiyaan banaanka garoomada ay kulamadu ka dhacayaan ee ayna koox kastaaba awoodi karin in ay amaanka ilaalin karto.
Balse taas badalkeeda waxay dawladu doonaysay in ay dhawr garoon oo amaankooda xoog loo ilaaliyay oo kaliya xili ciyaareedka lagu dhamaystiro.
Balse maamulka Premier league ayaa ku dhawaaqay in ay tixgalin siinayaan aragtida kooxihii ay maanta la kulmeen ee diiday in garoomo dhex dhexaad ah lagu ciyaaro, balse waxaa la sugayaa go’aanka dawlada UK ee haddii ay ogolaan karto in koox kastaaba ay garoonkeeda ku ciyaari karto.